XOG: Qatar iyo Taakulaynta Aragagexisada – Kismaayo24 News Agency
by admin 25th August 2017 0190
Qatar Waa dawladaw yar oo dadkeedu 300 oo kun yahay. Laakiin waxay leedahay dhaqaale aad u fara badan. Waxaa kaydkeeda dhaqaale lagu qiyaasaa in 300 oo bilyan oo doolar. Waxay leedahay Gaas Dabiiciga kan labaad ee Aduunka ugu badan marka laga tago Ruushka. Sanadkii 1995 ayaa talada dalka waxaa Afganbi kula wareegay Sh Xamad oo ah odayga dhalay Amiirka hataan xilka haya ee Sheekh Tamim Bin Xamad. Sheekh Xamad wuxuu dalkiisa u jeexay siyaasad ka duwan siyaasadaha dawladaha kale ee Khaliijka. Si uu saamayn ugu yeesho loona maqlo magaca dalkiisa oo aad u yare e Qatar wuxuu ka hawl galay siyaasad labo dhinac ah.
Awooda dabacsan/ Warbaahinta
Sheekh Xamad wuxuu furay warbaahinta Aljazeera oo lagu soo ururiyey xubno mucaarad ku ahaa dawladaha dalkooda oo isugu jira Islaamiyiin iyo Qowmiyiin. Waxay Jazeera ka dhigteen minbar laga dumiyo dawladaha Carabta, gaar ahaan kuw Khaliijka. Aljazeera waxay wax ka sheegtaa dawladaha Carbeed oo idil marka laga reebo Qatar. Wax xil ah iskama saaran xirfada iyo mihnada looga baahnaa warbaahin. Taasi waxay sababtay in ay isku dhacaan dhamaan dawlidihii Carbeed. Jazeera waxay kaloo buunbuunisaa aadna u baahisaa fariimaha iyo ficilada kooxaha argagexisada sida Alqaacida, Daacish, Shaabaab, Jabhatul Nusra iwm.
Awooda adag/ Kooxaha Argagexisada
Qatar si ay saamay u yeelato waxay taageero buuxda siisaa kooxaha Argagexisada ah, sida Alqaacida, Daacish, Alshabaab, Nusra, Jamaacatul Islaam. Arrinkaas Qatar waxay ku raadinaysaa in ay saamay ku kasbato. Madaxda Ururka Alshabaab ee Soomaaliya Waa geed fadhi u ah dalka Qatar. Qoysaska madaxda Alshabaab iyo ninkii ka baxaba waxay ku sugan yihiin dalka Qatar. Arrimaha xiriir ka Alshabaab iyo Qatar waxaa saldhig u ah Fahad Yaasiin oo u shaqayn jiray taleefishanka Aljazeera haatana ah agaasimaha Xafiiska Madaxweyne Farmaajo. Fahad wuxuu ku qasbay Farmaajo in uu Amiirka Qatar ka codsado in ay dhexdhexaadiyaan Dawlada iyo Alshabaab. Shirkii ay dawladaha Masar, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ku yeesheen magaalada Qaahira 5tii Bishii Juulaay ee 2017 waxay ka soo saareen bayaan ay ku cadaynayaan in Qatar ay taakulayso ururada Xagjirka ah ee dalalka Ciraaq, Suuriya, Liibiya, Yemen iyo Soomaaliya. Dhamaan dawladaha kale jawaab buuxda ayey arrinkaas ka bixiyeen, marka laga reebo Dawlada Soomaaliya oo ka gaabsatay arrinkaas. Taasi waxay cadayn u tahay in Dawlada Soomaaliya aysan ku dhiiran karin Dawlada Qatar oo aysan runta u sheegi karin.
Dadwaynaha Soomaaliyeed waxay aad ula yaabeen sababta keentay in Dawlada Soomaaliya ay la safato Dawlada Qatar oo taakulaysan Alshabaab. Taas macnaheedu waa in ay Dawlada Farmaajo doonayso in dhibka, dilka iyo xasuuqa Shacabka Soomaaliyeed sii socdo.
Dawladaha Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay Soomaaliya u soo direen Safiiro buuxa, halka ay Dawlada Qatar ilaa hataan u quuri waysay in ay Soomaaliya u soo dir Safiir. Waxay kaloo dawladahaasi dhaqaale iyo taageero diblomaasiyadeed la garab taagan yihiin Dawlada Soomaaliya, halka Qatar ay Aragagexisada taageerto. Ugu yaaraan 500 milyan ayaa Soomaaliya ka soo gasha xoolaha ay Sacuudiga u dhoofiyaan, halka 2bilyan ee lacagaha xawaaldaha ay marin u tahay dalka Imaaraadka Carabta. Waxaa maalmahan isi soo taraya baaqyo kala duwan oo bulshada Soomaaliyeed ka imaanaya kuwaasoo ku baaqaya in Dawlada Soomaaliyeed ay xiriirika u jarto Dawlada Qatar